Shiinaha Dibenzoylmethane Soo-saar iyo Warshad | Teknolojiyadda cusub ee Shuiyuan
Kiimikooyinka Aasaasiga ah ee Aasaasiga ah
Qalabka Kiimikada Dibenzoylmethane
75-79 ° C (shiday)
219-221 ° C18 mm Hg (shidan)
Ku kaydi RT.
8.95 ± 0.10 (Saadaalin)
Waxay ku milmi kartaa ether, chloroform, iyo sodium hydroxide aqueous. Biyaha aan lagu milmin.
Xasilloon La jaan qaadi karin wakiilada oksijiinta ee xoogan.
Isticmaalka Dibenzoylmethane Iyo Sintir
Waxyaabaha Kiimikada ah: budada huruud-cad
Wuxuu adeegsadaa: dibenzoylmethane oo ah xasiliyaha kuleylka cusub ee PVC, gudbinta sare, aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn; wuxuu si weyn u wanaajin karaa midabaynta hore ee PVC, daahfurnaanta, xasiloonida muddada-dheer, iyo ka shaqeynta inta lagu jiro roobka iyo "zinc burn" iyo wixii la mid ah; si ballaaran loogu adeegsado daawooyinka, baakadaha cuntada iyo waxyaabaha kale ee aan sunta ahayn ee PVC. Dibenzoylmethane kor ku xusan wuxuu nuugi karaa 290nm iftiinka ultraviolet, halka iftiinka oo saameyn xasilloon ku leh alaabada PVC ay ku siin karto waxqabad xasiloon oo muddo dheer ah.
Qeexid: ChEBI: beta-diketone oo ah acetylacetone (acac) taas oo labada koox ee methyl lagu badalay kooxo fenyl ah. Waa qayb yar oo ka mid ah soosaarida xididka licorice (Glycyrrhiza glabra) waxayna soo bandhigtaa antimutagenic iyo saameynta afka ilmagaleenka.
Xogta Badbaadada: sun dhexdhexaad ah oo la cuno. Marka la kululeeyo si uu u burburo waxay soo saartaa qiiqa acrid iyo uumiga xanaaqa
Hababka Nadiifinta: Dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) [120-46-7] M 224.3, m 8 0o. Ka nadiifi dibenzoylmethane xayawaanka ether ama MeOH. [Beilstein 7 IV 2512.]
Qalabka xasilinta kuleylka ee sunta ah ee sunta ah ee sunta ah, zinc iyo dhif iyo naadir ——Dibenzoylmethane (DIBENZOYL METHANE) Tusmada tayada ugu weyn: Muuqaalka: Caddaan, khafiif ah budada kareemka macmacaanka ah Mawduuca: point99% Bar dhalaal: 76 ~ 80 ℃ Qallajinta luminta: ≤ 0.5% Dambaska ash: ≤0.1% Xirxirida: 25kg, 50kg Stearoyl benzoyl waxsoosaarka methane: PVC xasilinta kuleylka kaaliyaha ah ee aan sunta ahayn, waxaa loo isticmaali karaa iyo kalsiyum / zinc, barium / zinc iyo waxyaabo dhif ah oo dhulka ka mid ah, oo lagu tijaabiyey Xarunta Cilmibaarista Qaranka waxayna cadeeyeen tayada badeecaduhu inay si buuxda ula kulmaan heerarka tayada ee alaabooyinka shisheeye ee la midka ah. Shirkadeenu waa mid ka mid ah soo saaraha ugu weyn ee Dibenzoylmethane wax soo saarkana waxaa badanaa laga iibiyaa Yurub, Ameerika, Taiwan ee Shiinaha, Japan, Kuuriyada Koofureed, Ruushka, Hindiya,
Mexico, iwm oo waxaan ku leenahay macaamiil in ka badan 40 dal. Badeecadani waa mid cad ama midab huruud ah oo kareem ah, si fudud ugu milmi kara eterka, trichloromethane, o-Xylene, toluene iyo sodium hydroxide aqueous, wax yar ku milma ethanol, biyo aad u yar ku milma. Nooc cusub oo ah xasiliyaha kuleylka ee kaabayaasha ah ee 'PVC', gudbinta waa mid sare, oo aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn; waxaa loo isticmaali karaa kalsiyum / zinc adag ama dareere ah, barium / zinc iyo xasiliyayaal kale oo kuleyliyayaal ah, waxay si weyn u wanaajin karaan midabaynta bilowga ah ee PVC, daahfurnaanta, iyo xasiloonida muddada-dheer, iyo sidoo kale roobka iyo 'zinc fever' ee ka baaraandegista; ma waxay leedahay saameyn aad uwanaagsan oo 'saabuun zinc' ah, ku darida badeecadani waxay si wax ku ool ah u joojin kartaa 'gubashada zinc', oo ku habboon in lagu hirgeliyo qallafsanaanta, sunta aan sunta lahayn, beerka aan dhadhanka lahayn, kor u qaadista cusbooneysiiyaha Calcium / Zinc. waxaa si weyn loogu isticmaalaa daawooyinka, baakadaha cuntada iyo waxyaabaha kale ee aan sunta ahayn ee PVC (sida dhalooyinka PVC, go'yaal, filim hufan iwm). Dibenzoylmethane waxay nuugi kartaa wax ka badan 290nm UV, isla mar ahaantaana leh shaqaynta xasilinta iftiinka, waxay ku siin kartaa xasillooni muddo dheer ah alaabada PVC.
Xiga: 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione 99%